စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဖော်ဆောင်ပေး
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်သည် “ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့” ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်က ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO)ကို စတင်ဖွဲ့စည်းရာ ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့စားနပ် ရိက္ခာနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အခမ်းအနားကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအလိုက် က
Read more about စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဖော်ဆောင်ပေး
၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် အငြင်းပွားနေဆဲ Brexit အရေး
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း အနုတ်လက္ခဏာဖြင့် ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးကျဆင်းမည်ဟု အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) က ခန့်မှန်းထားခဲ့ပြီး ယင်းခန့်မှန်းချက်ကို အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကာ ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံးနှင့် ရှည်ကြာဦးမည့် ကပ်ဘေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပြန်သည်။
Read more about ၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် အငြင်းပွားနေဆဲ Brexit အရေး
ကျန်းမာသက်ရှည်ဖို့ စားသုံးဖွယ်ရာများ ဆင်ခြင်စို့
အရသာရှိသော အစားအစာများကို လူသားတိုင်းခုံမင်စွဲလမ်းကြသည်။ ချို ချဉ်ဖန်ခါးအရသာရှိသော အစားအစာများကို မိမိအကြိုက် အပေါ့အလေးမြည်းစမ်းပြီး စားသုံးကြတာများပါသည်။ မိမိစားသုံးသော အစားအစာများသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းရေးအတွက် အဓိကဖြစ်သည်။ အစာအာဟာရဖြစ်ထွန်းမှ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ကိုယ်ခန္ဓာကိုရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျန်းမာမှ စိတ်ခ
Read more about ကျန်းမာသက်ရှည်ဖို့ စားသုံးဖွယ်ရာများ ဆင်ခြင်စို့
ကုန်းဘောင်ခေတ်ကစာတွေမှာရော အပြောမှာ သုံးတဲ့စကားတွေ ပိုများမလာဘူးလား
အင်း...ကုန်းဘောင်ခေတ်ဟာ စာမျိုးစုံထွန်းကားတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ စကားပြေတွေ အရင်ကထက်ပိုများပါတယ်။ ကဗျာတွေကတော့ ဒါ့ထက်ပိုများတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ညောင်ရမ်းခေတ်တုန်းကလိုပဲ စကားပြေထဲမှာ အပြောစကားသိပ်မပါသေးဘူး။ ပြဇာတ်မှာတော့ တော်တော်ပါနေပြီ။ ကဗျာဆိုရင်လည်း ခံ့ခံ့ညားညားရေးတဲ့ပျို့၊ မော်ကွန်း၊ ဧချင်း၊ ရတု စတဲ့ကဗျာတွေမှာ အပြောစကားမပါဘူးဗျ။ သာမန်ပြည်သူတွေအကြောင်း ရေးတဲ့လွမ်းချင်းတို့၊ ဗုံကြီးသံတို့၊ ကောက်စိုက်သီချင်းတို့လို ကဗျာတွေမှာ အပြောစကားတွေတော်တော်ပါနေပါပြီ
Read more about အပြောစကားပြေအစဉ်အလာ( )
နည်းလမ်းမှန်သော အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် နေ့စဉ်နေထိုင်ခြင်း
အကောင်းမြင်ဝါဒ (Optimism)နှင့် အဆိုးမြင်ဝါဒ (Pessimism) ဆိုသည့် ဝါဒနှစ်ခုလုံး လူတိုင်းမှာရှိနိုင်ပေသည်။ ပမာဏအနည်း၊ အများပေါ်မူတည်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းများသော ခံစားမှုသည် အားသာသော စိတ်ခံစားမှုဘက်သို့လိုက်ကာ အကောင်းမြင်ဝါဒ သမားများနှင့် အဆိုးမြင်ဝါဒသမားများ ဟူ၍ ကွဲပြားလာကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
Read more about နည်းလမ်းမှန်သော အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် နေ့စဉ်နေထိုင်ခြင်း
သင့်လက်တစ်ကမ်းမှာ . . . စွမ်းဆောင်ပါ (အဆစ်ရောင်ရောဂါ)
အဆစ်အမျက်ရောင်ရမ်းခြင်းတွင် အဆစ်အမျက်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်း၊ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ဖြစ်ခြင်းနှင့် မိမိပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ကိုက်ခဲရောင်ရမ်းသော အဆစ်အမျက်တို့မှာ ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် လက်နှင့်စမ်းသပ်ကြည့်လျှင် ခပ်နွေးနွေး၊ ခပ်တင်းတင်း ဖြစ်နေတတ်သည်။ ပုံ
Read more about သင့်လက်တစ်ကမ်းမှာ . . . စွမ်းဆောင်ပါ (အဆစ်ရောင်ရောဂါ)
ကမ္ဘာ့စင်မြင့်မှဖယ်ခွာလာသည့် အမေရိကန်နှင့် ဖြတ်ကျော်ရမည့် ရေခဲမရှိသည့် အနာဂတ် နွေရာသီများ
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ပိုမိုနားလည်စေရန်နှင့် ထိရောက်စွာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန် ၂၀၁၉ ခုနှစ်က နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်မှ သိပ္ပံပညာရှင် ၃၀၀ ကျော်က မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ ရေခဲပြင်ခွဲသင်္ဘော ကြီးဖြင့် ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။
Read more about ကမ္ဘာ့စင်မြင့်မှဖယ်ခွာလာသည့် အမေရိကန်နှင့် ဖြတ်ကျော်ရမည့် ရေခဲမရှိသည့် အနာဂတ် နွေရာသီများ
စည်းကမ်းဟူသည် လိုက်နာစောင့်ထိန်း ရမည့် ကျင့်ဝတ်ဟူ၍ မြန်မာအဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ်တွင် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ စည်းနှင့်ကမ်းတို့၏ တစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း မြန်မာအဘိဓာန် အကျဉ်း ချုပ်တွင် ယခုလိုဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
(၁) ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသော ခြံဝင်းအကာအရံ၊ စောင်ရန်း၊ စည်းရိုး၊ လယ်မှာကန်သင်း ယာမှစည်းအတွင်း။
(၂) တစ်စုံတစ်ခုသောမျက်နှာပြင်ပေါ်၌ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသော အရေးအကြောင်း။ ဖြစ်ပျက် ပိုင်းခြားစည်းနှယ်ထား၏။
Read more about ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ စည်းကမ်းကိုယ်စီလိုက်နာစို့
ဆိုးရွားသောအဆုံးသတ်များဆီသို့ ဦးတည်လာနေသည့် တူရကီ
၁၅ ရာစုနှင့် ၁၆ ရာစုကြား အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သော တူရကီ၏ အော်တိုမန်အင်ပါယာ အိပ်မက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်သူ လက်ရှိ တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန် အာဏာရထားသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုနီးပါး ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
Read more about ဆိုးရွားသောအဆုံးသတ်များဆီသို့ ဦးတည်လာနေသည့် တူရကီ
ပေါင်းစည်းညီညွတ်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုမှသည် သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆီသို့
Read more about ပေါင်းစည်းညီညွတ်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုမှသည် သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆီသို့